Dzokera Kudzokera Musango Nemuchina Unouya Blair Witch Project Zvinyorwa - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Dzokera Kudzokera MuMatanda Neiyo Inouya Blair Witch Project Gwaro
Dzokera Kudzokera MuMatanda Neiyo Inouya Blair Witch Project Gwaro
by arun February 17, 2015
by arun February 17, 2015 772 maonero
Kunyangwe iwe uchiida, itya kana kuvenga, hapana kuramba izvo Iyo Blair Witch Project ndeimwe yemafirimu akakurisa uye anotyora pasi munhoroondo yekutyisa. Yakaburitswa muna1999, iyo yakaderera-bhajeti firimu inozivikanwa yekukangisa-kutanga iyo yakawanikwa vhidhiyo sub-genre - uye isu tinokukurudzira iwe kuti usapa mhosva iyo kune 10,001 makopi akauya mukumuka kwayo!
Kune mashoma anotyisa mafirimu ane zvechokwadi anotyisa vateereri kupfuura Iyo Blair Witch Project, iyo yaive nemushandirapamwe wekushambadzira wakajeka zvekuti vazhinji pakutanga vakagutsikana kuti raive basa rechokwadi. Kunyangwe isu tazviziva ikozvino chokwadi, zvichiri zvinotyisa zvinotyisa sezvakamboita, anoda kusvika makumi maviri emakore gare gare.
Patakamirira Iyo Blair Witch Chirongwa 3, zvichangobva kuburitswa kuti chinyorwa pamusoro peiyo yekutanga firimu iri munzira. Zvakakodzera kutumidzwa Iyo Woods Bhaisikopo, iyo urefu hwesimba doc inokutora iwe kuseri kwezviitiko zveiyo iconic firimu rekugadzirwa, ichipa zvisingaenzaniswi kuwana kune izvo zvinoshamisa.
Hechino chepamutemo chirongwa chekupwanya:
Muna Gumiguru 1997, boka revagadziri vemafirimu vakapinda musango reMadganini kuti vabudise yakaderera-bhajeti yakazvimirira inotyisa bhaisikopo. BLAIR WITCH PROJECT yaizove chiitiko chepasi rose uye yakatanga iyo "yakawanikwa mifananidzo" iyo inoramba iine simba nhasi. Zvino, kekutanga, iwe unogona kuona kuti iro rekodhi-rekuvhuna gavhuvhu rakavapo sei. Kubva pane zvisati zvamboonekwa-kurekodhwa kwemisangano yepamberi pekugadzira, matepi ekuongorora, uye mavhidhiyo ekuyedza kupfura chaiko, kutanga kuongorora kuongorora, uye kushambadzira kuSundance Film Festival, vese vashandi vanokosha vanokutungamira nhaurirano uye sarudzo dzakaratidza kuvhunduka sensation classic.
Tarisa uone tirera yeiyo doc pazasi, iyo yakagadzirirwa kuratidzira iyi iri kuuya Nyamavhuvhu paFlightFest Glasgow
[vimeo id = "119458718 ″]